Kukuya Zvikamu Service Ningbo Daohong Machine Co., Ltd.
Kunze Kwemasuo Edhi
15mm Dhivha Reel
20mm Dhivha Reel
30mm Dhivha Reel
50mm Kudhiraivha Reel
Nyowani Type Diving Reel
Bhora Kutakura Swivel
Brass Kubata Swivel
Kudhiraivha Reel Swivel
Stainless Simbi Kubata Swivel
Ongorora Leash Swivel
Kubata Reel Ruoko Ruoko
Machining Zvikamu Maitiro
CNC Precision otomatiki machine zvikamu
Tsika Ekugadzira Zvikamu
Wood-Kushanda Mashini Zvikamu
Zvekurima Mashini Zvikamu
Cnc Zvikamu Service
Kukuya Zvikamu Service
Machining & Kutendeuka Zvikamu Service
Metal Kukuya UYE Kukanda Mapazi
Daohong inozivikanwa yeedu yepamusoro-chaiyo kukuya nekurovera masevhisi, ayo anotibvumidza isu kuzadzisa sub-micron mwero shiviriro uye pamusoro zvinopedzisa zvisingaenzaniswi nevakwikwidzi vedu. Kukwanisa kwedu kupa masevhisi aya kunosvika kumachubhu uye waya nehupamhi hwakanyanya kushoma kuti uone.
Chii chinonzi Centerless Kukuya?
Nayo isina chigayo chigayo, workpiece inotsigirwa nebasa rekuzorora reza uye kumisikidzwa pakati pakaoma vitrified inodzora vhiri iyo inotenderera iyo yekushandira uye inotenderera yekugedza vhiri. Centerless kukuya iOD (yekunze dhayamita) kukuya maitiro. Yakasarudzika kubva kune mamwe maindasitiri maitiro, iko iko iko kwekushandira kunoitwa muchina wekugaya uchikuya pakati penzvimbo, iyo yekushandira haina kumanikidzwa panguva yekugeda isina nzvimbo. Naizvozvo zvikamu zvacho zvinotsikirirwa pachigadziko chisina nzvimbo hazvidi maburi epakati, madhiraivha kana zvigadziriso zvemusoro pamagumo. Panzvimbo iyoyo, iyo yekushandira inotsigirwa mumuchina wekukuya pane yayo yekunze dhayamita nebasa reblade uye neiri kuronga vhiri. Iyo yekushandira iri kutenderera pakati peiyo yekumhanyisa-kumhanyisa vhiri uye inononoka kumhanya inodzora vhiri ine diki dhayamita.
Pamusoro kukuya kugona kwakakosha kunotibvumira kuti tigadzire yakasarudzika zvigadzirwa, kuzadzikisa micron level tolerances uye pamusoro inopedzisa kudzika kuRa 8 microinch.
Chii chiri Pakati Pakati Pekugaya?
A between centres or cylindrical grinder imhando yeguyo muchina unoshandiswa kuumba kunze kwechinhu. Iyo yekukuya inogona kushanda pamhando dzakasiyana, zvisinei, chinhu chinofanira kuve nechepakati axis yekutenderera. Izvi zvinosanganisira asi hazvirevi kune maumbirwo akadai seyesilinda, ellipse, cam, kana crankshaft.
Ndekupi Pakati Pakati Pekukuya Kuitika Pane Iyo Yekushandira?
Pakati penzvimbo kukuya kuri kukuya kunoitika pamusoro pekunze pechinhu pakati pezvikamu. Munzira iyi yekugaya nzvimbo nzvimbo dzekupedzisira dzine poindi inobvumidza chinhu kutenderedzwa. Gumbo rekukuya riri kutenderedzwa nenzira imwechete kana rasangana nechinhu. Izvi zvinobudirira zvinoreva kuti huso huviri huchave huchifamba nenzira dzakatarisana kana kutaurirana kuchiitwa kunobvumira kushanda kwakatsetseka uye mukana mushoma wekukwirana.
Tsika Yesimbi Kukuya Zvimiro
Kubatanidzwa kwedu kwekudonha, pamusoro, uye CNC yekugeda maficha kunogona kuburitsa zvinobudirira mageometri akaomesesa-axis pazvinhu zvakaoma-kumushini simbi ine pamusoro pekupedza zvisingawanikwe kubva kumamishini nzvimbo. Akaomeswa profiles, mafomu, akawanda tapers, akatetepa masiketi, angles ese, uye akanongedzwa simbi zvikamu zvese zvinogadzirwa nekumhanyisa uye nemazvo.
Yakazara Service Simbi Kukuya Center
Yedu yakazara-basa simbi kukuya pakati inosanganisira:
● 10 inogaya isina nzvimbo
● 6 vanonyudza / profiles vanokuya
● 4 vanokuya pasi
Nezve Precision Grinding Services
● Kupa zvisingaenzaniswi kukuya kushivirira pasi kune ± 0.000020 ”(± 0.5 μm)
● Grimeter yepasi sediki se0.002 ″ (0.05 mm)
● Pasi pevhu panopedzisa kutsetseka seRa 4 microinch (Ra 0.100 μm) pane ese akasimba mativi uye machubhu, kusanganisira matete emadziro matopu, akareba mativi ezvinhu, uye madhivha waya kunge madiki se0004 "(0.10 mm)
Kana iwe uchida yakakwenenzverwa chikamu chinopera, chakanyanya kuomarara kureba kushivirira, uye kunoshamisa kupfava hakuwanikwe nechero imwe nzira yekugadzira, isu tinoshandisa edu akasarudzika e-mumba kurovera michina. Tinogona kugadzirisa zvese machubhu uye zvisvinu tichishandisa kugona kwedu kurova, kugeda kwakanaka, uye kugona kugona kugona, zvichitibvumidza kusangana nemazvo kushivirira uye pamusoro pekupedzisa zvinodiwa. Pamusoro pezvo, yedu inoshanduka kugadzirwa inokwana inoita kuti tikwanise kusangana zvese zvidiki uye zvidiki vhoriyamu zvido zvekunyatso kuita diki simbi zvikamu
● 10 michina inorovera inobata kureba uye ukobvu kutsungirira kusvika pa ± 0.0001 ”(0.0025 mm)
● Kugona kweRa 2 microinch (Ra 0.050 μm) kupera kunopedzisa pane ese akasimba mativi uye machubhu, kusanganisira matete emadziro matopu uye marefu marefu zvikamu
● Kureba kubva kupfupika se0.001 ″ (0.025 mm) kusvika pazosvika 3.0 ″ (7.6 cm)
● Dhayamita diki se0,001 ″ (0.025 mm)
● Maitiro etsika ekugadzirisa zvisina kufanira pamusoro uye kuwana kwakapfava uye kufanana
● Surface metrology inosimbiswa neakawanda mukati-dzimba LVDT masystem uye emakomputa profilometers
Ndezvipi Zvakanakisa Zvishandiso Zvepamusoro Kugaya?
Chairo zvinhu zvekushandira zvinosanganisira simbi yakakandwa uye simbi yakapfava. Zvinhu zviviri izvi hazviwanzo kuvhara vhiri rekukuya richiri kugadziriswa. Zvimwewo zvinhu aruminiyamu, simbi isina chinhu, ndarira uye mamwe mapurasitiki. Kana uchikuya pakakwirira tembiricha, izvo zvinhu zvinowanzoita kushomeka uye zvinonyanya kuda kukora. Izvi zvinogona zvakare kukonzera kurasikirwa kwemagineti mune zvigadzirwa uko izvi zvinoshanda.
Maindasitiri Zone A Hong Xing Road, 315040 Ningbo ZheJiang China